कोरोनाबाट बुटवलमा थप एकको मृत्यु – News Dainik
कोरोनाबाट बुटवलमा थप एकको मृत्यु
News desk १६ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०७:३५ विविध प्रतिकृया दिनुहॊस
रुपन्देही । रुपन्देहीको बुटवलमा थप एक जना कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ ।
असोज ११ गते कोरोना पोजिटिभ देखिएर होम आइसोलेसनमै बसेका रुपन्देहीको सैनामैना-७ रामापुरका ६० वर्षीय पुरुषको बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालमा बिहीबार राति ११ः५० बजे मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्यमा थप समस्या भएपछि असोज १३ गते अस्पताल भर्ना भएका उनलाई २ दिनदेखि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो । योसँगै अस्पतालमा मृत्यु हुनेको संख्या २२ पुगेको छ ।
अघिल्लॊ कमजोर बन्दै मनसुन: कस्तो रहला देशभरको मौसम ?
पछिल्लॊ दलितकी छोरी भन्दै झुक्याएर गर्भपतन गराई घर निकाला